Afghanistan: Feon’ny Tanora Afghan Ao Amin’ny Lanonamben’ny Fampitam-baovao Marolafy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2011 12:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Ao Afganistana, nikofokofoka tokoa ny tambazotra Internews mba hanazatra sy hanetsiketsika ireo tanora Afghan hizara ny fomba fijeriny amin'izay lohahevitra mahaliana azy ireo ao amin'ny Afghan Youth Voices Festival na Lanonamben'ny Tanora Afghan manandram-peo sy ny lasim-pampitam-baovao.
Feon'ny Tanora Afgana Lanonambe
Ny Afghan Youth Voices Festival dia sehatra iray ahafahan'ny tanora Afghan maneho ny heviny, na izany amin'ny alalan'ny famokarana horonantsary na Facebook, amin'ny alalan'ny fitaovana vaovao fampitam-baovao tahaka ny bilaogy na ny nentim-paharazana tahaka ny teatra.
Sehatra ifampitafatafana ahafahan'ny tanora Afghan miaraka mamokatra tantara, miara-miasa sy miara-milalao ny Lanonamben'ny Tanora Afghan manandram-peo.
Mba hanatanterahana izany, dia manolotra fiofanana amina karazam-pampitam-baovao marolafy izahay. Raha liana amin'ny famokarana zavatra iray ianao, mirotsaha ho amin'izany anio! Manasa ny rehetra, raha mbola tanora ianao.
Efa manana lahatsary maromaro sahady izy ireo, izay mitantara ny karazana fomba fifandraisan'ireo tanora Afghan: amin'ny fampiofanana azy ireo amin'ny fahaizana manokana vaovao, fanehoana ny eritreriny sy ny fikasany na fanolorana lohahevitra izay mahakasika azy ireo.
Mampiseho ireo ankizy miasa eny amin'ny fanaovam-biriky ny lahatsary voalohany:
Tanora Afghan an-jatony no miasa amin'ny orinasam-biriky mahahenika ny firenena, miasa mandritra ny ora maro ao anatina toeram-piasana tsy manara-penitra mba hamelomany ireo fianakaviany. Ao anatin'ity lahatsary mampihetsi-po ity, dia mpandray anjara amin'ny Lanonamben'ny Tanora Afghan Manandra-peo, Safitullah sy Safiqullah no mitantara ny fiainan'ireto ankizy mpiasa eny amin'ny orinasam-biriky ao Jalalabad.
Ny fiainana andavan-andron'i Mohammad , tovolahy 20 taona izay tompon'andraikitra amin'ny famelomana ireo fianakaviany taorian'ny fahafatesan'ny rainy. Miompy akoho sy mitantana trano kely fivarotana enta-madinika no asany, araka izany, ahoana ny fomba ataony ahafahany mamelona ireo mpiray tampo aminy mbola herotrerony.
Mampiseho anay ireo karazam-piainan'ny tanora monina ao Afghanistan ny Fipetrahana anaty Hotely: amin’ity horonantsary ity dia afaka mahita ny fianan'ity tovovavy iray ity mandritra ny andro isika izay lavitry ny tranony ny fianarany ary mipetraka amin'ny hotely miaraka amin'ny vehivavy mpianatra hafa koa izy.
Ho a'ny tanora sasany, ny mozika no fialambolin'izy ireo. Mampiseho tovolahy iray milalao harmonia sady mihira ity lahatsary manaraka ity, avy eo nisy tovolahy hafa nanatona azy ireo niaraka tamin'ny ampongatapaka.
Manana fampiofanana an-tserasera ihany koa ny Lanonamben'ny Tanora Afghan manandra-peo izay azon'ny tanora Afghan hafa eo amin'ny 15 sy 25 taona atrehina ka maniry ny hirotsaka amin'izany. Afaka miditra ao amin'ny YouTube sy flickr saripika azy ireo koa ianao, ary afa-mitety ireo voarakitra hafa rehetra izay efa mandravaka ny tranonkalany notontosain'ny tanora Afghan ihany koa.